विषादीको असरः परिवारै अपाङ्ग |
विषादीको असरः परिवारै अपाङ्ग
प्रकाशित मिति :2017-09-17 16:26:24
तरकारीमा प्रयोग गर्ने अर्गेनो फस्फोरस कम्पाउण्ड नामक विषादीले महिलाहरुलाई चाँडो असर पुर्‍याउँछ । सुरक्षा सामग्री प्रयोग नगरी विषादी छर्दा मुटु, श्वासप्रश्वासमा असर पुर्‍याउँछ । महिलाको पाठेघरमा समस्या आउने, प्रजनन् क्षमतामा ह्रास हुने, निःसन्तानपन समेत हुनसक्छ । क्यान्सरको त अझ प्रमुख कारक हो ।
काभ्रे । महादेवस्थान काभ्रेकी ५५ वर्षीया मनमाया दनुवार अहिले सुष्त मनस्थितीको बिरामी छिन् । डाक्टरका अनुसार मनमाया तरकारीमा राख्ने विषादीका कारण सुस्त मनस्थितीको शिकार भएकी हुन् ।
मनमायाले आफ्नो जग्गा नभएका कारण भाडामा लिएर केहि वर्षदेखि तरकारी खेती गर्दै आएकी थिईन् । ४ रोपनी जमिनमा शुरु गरेको तरकारी खेती राम्ररी फस्टायो । धेरै फलाउने लोभमा मनमायाले दिन दिनै तरकारीमा विषादी राख्ने र तत्काल बजारमा बिक्री गर्न लैजाने गर्न थालिन् ।
उनले तरकारी खेतीकै कमाईले छोराको विवाह गरिदिइन् । छोरालाई विदेश पठाउन खर्च गरिन् र बुहारी सहित तरकारी खेतीलाई निरन्तरता दिईन् । उत्पादन बढाउने लोभमा विषादीको प्रयोगलाई भने जोड दिइरहिन् ।
गर्भावस्थामा पनि बुहारीले तरकारी खेतीमा सासुलाई सहयोग गरिरहिन् । जसको असर गर्भमा रहेको बच्चालाई समेत विषादीको असर परेछ । उहाँबाट जन्मिएको बच्चा सुस्त मनस्थितीको भयो । अहिले मनमायाकी बुहारी र ६ वर्षकी नातिनी समेत विषादीकै कारण सुस्त मनस्थितीका छन् ।
कृषि विशेषज्ञ हरिकृष्ण थापाका अनुसार तरकारीमा राख्ने अर्गेनो फस्फोरस कम्पाउण्ड नामक विषादीले महिलाहरुलाई चाँडो असर पु¥याउँछ । यो औषधीको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा काम गर्नाले गर्भमा रहेका भ्रुणमा असर पुर्‍याउँछ सुस्त मनस्थिती बनाउन सक्छ । सुरक्षाको सामग्री प्रयोग नगरी विषादी छर्दा मुटु, श्वासप्रश्वासमा असर पुर्‍याउँछ । भने क्यान्सरको त अझ प्रमुख कारक हो ।
धुलिखेल अस्पतालका इन्टरनल मेडिसिन प्रमुख डाक्टर राम गुरुङका अनुसार पनि मनमायाको परिवारले लामो समयदेखि अर्गेनो फोस्फोरस कम्पाउण्ड विषादीको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा काम गरेको कारण रोगले संक्रमण गरेको बताएका छन् । उनीहरुले सुरक्षाका सामग्री समेत प्रयोग नगरेको कारण संक्रमण धेरै भएको बताएका हुन् । मनमायाको परिवारले शुरुमा विषादीको असर बारे जानकारी नहुँदा हातले नै विषादी घोल्ने, विना सुरक्षा विषादी प्रयोग गर्ने गरेकै कारण अहिले जटिल स्वास्थ्य समस्या भोगिरहेका छन् ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय काभ्रेका प्रसार अधिकृत श्रीकृष्ण धितालका अनुसार तरकारीमा राख्ने विषादीका कारण जिल्लाका दनुवार जातीका अधिकांश महिला प्रभावित छन् । आफ्नो स्वामित्वको जमिन थोरै भएर जीविका चलाउन भाडामा लिएको जमिनमा व्यवसायिक तरकारी खेती गरेका दनुवार जातिहरुले विषादी प्रयोग त गरे तर सुरक्षा अपनाउन सकेनन् । न त उनीहरुलाई यसबारे सरोकारवालाले नै चेतना दिए । त्यसैको मारमा अहिले उनीहरु परेका छन् ।
कृषि तथा वन विश्व विद्यालय र एक्सन एड नेपालले सन् २०१५ मा गरेको एक अध्ययन अनुसार ७७ प्रतिशत कृषकले विषादीको नकारात्मक असर हुन्छ भन्ने थाहा छ । तर, ५५ प्रतिशतले विषादी छर्कंदा कुनै पनि सुरक्षा पहिरन तथा कवच प्रयोग गर्दैैनन् । अध्ययन अनुसार नेपालमा विषादी छर्ने कृषकहरूले सामान्य किसिमका सुरक्षा पहिरनहरूः मास्क, बुट, चस्मा, टोपी आदी समेत प्रयोग नगरी विषादी छर्कन्छन् । जसको प्रत्यक्ष असर उनीहरु आफै पर्ने गरेका छन् ।
राजधानीलाई चाहिने तरकारीको मागको २५ प्रतिशत तरकारी काभ्रे जिल्लाको उत्पादनले पुरा गर्छ । जसमा आलु, काउली, बन्दाकोबी, साग, तितेकरेला, गोलभेंडा लगायतका तरकारी पर्दछन् । तर, तरकारीमा प्रयोग गर्ने विषादी कुन कुन समयमा प्रयोग गर्ने ? कसरी प्रयोग गर्ने र कति मात्रामा प्रयोग गर्ने ? प्रयोग गरिएको विषादी भएका तरकारीहरु कुन समयमा टिपेर बजारमा लैजाने ?
भन्नेमा अझ सचेत छैनन् ।
सोही अध्ययन अनुसार बालीनालीमा विषादी छरेपछि टिपीखान तथा सो स्थानमा प्रवेश गर्नका लागि पर्खिनुपर्ने सिफारिस गरिएको समय ९२ प्रतिशत कृषकले पालना गर्दैनन्, जुन ताजा तरकारी तथा फलपूmलको परीक्षणमा विषादी अवशेष देखिनाको मुख्य कारण हो ।
२०७१ असार महिनामा कालीमाटी तरकारी थोक बजारमा विषादी अवशेष दु्रत विश्लेषण प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएका १८७ नमुना मध्ये ६ वटा (३ प्रतिशत) नमुना ५ दिनसम्म पानीमा राखी मात्र खान मिल्ने, र २६ (१४ प्रतिशत) नमुना खान अयोग्य ठह¥याइएका थिए जसले कृषि उत्पादनमा विषादीको बढोत्तरी प्रयोगको पुष्टि गर्दछ । जसको मुख्य असर महिला तथा बालबालिका अझ बढि पर्ने गरेको डा. थापाको भनाई छ ।
यद्यपी, पछिल्लो समय जिल्लामा विषादीको प्रयोग घटेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको दाबी छ । तरकारीमा विषादी प्रयोग गरिसकेपछि कम्तिमा दुई दिनसम्म बारीमा जानु हुँदैन । तर, कृषकहरुले बिहान विषादी प्रयोग गरेर दिउँसो टिपेर बजारमा लैजाने गर्दथे । यो रुटिङ विस्तारै परिवर्तन भएको धितालले बताए ।
जिल्लाको कुशादेवी, नाला, र्याले, पाँचखाल, मण्डन, भकुण्डे लगायतका क्षेत्रमा विषादीको प्रयोग घटेको कार्यालयको भनाई छ । कार्यालयले पहिलो चरणमा पाँचखाल नगरपालिकाकालाई ‘अर्गानिक पाँचखाल’ घोषणा गर्ने तयारीमा जुटेको उनले बताए ।
विशेषज्ञ हरिकृष्ण थापाका अनुसार विषादीको प्रयोग गर्दा पातलो कपडा लगाउने, जुत्ता नलगाएर चप्पल मात्रै लगाउने, माक्स नलगाउने गर्दा तत्काल विषादी प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई टाउको दुख्ने, हातगोडा झम्झमाउने, रिंगटा चल्ने हुन्छ । कालान्तरमा बालबालिकाहरु सुस्त मनस्थितीका जन्मने, छालाको क्यान्सर, रगतको क्यान्सर हुने गर्दछ । महिलाको पाठेघरमा समस्या आउने, निःसन्तानपन समेत हुनसक्ने उनले बताए ।
(सरिता सापकोटा काभ्रेकी पत्रकार हुनुहुन्छ )